Sabti, Sebtember 20, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Cunnadayda saaka, kor ayaa u soo baxay a post taas ayaa soo jiidatay dareenkeyga, Sida loo dajiyo qoraal dhegeysi Twitter ah. Markii aan guji boostada, in kastoo, waan niyad jabay maxaa yeelay dhab ahaantii ma jirin faahfaahin ku saabsan dejinta dhabta ah dhegeyste. Taabadalkeed, waxaa si fudud layla kulmay qoraal ku saabsan sida loo dejiyo a Twitter xisaabta.
Sameynta koonto Twitter kuuma siinayso wax aragti ah oo ku saabsan waxa dadku runti yihiin oo wuxuu ku yidhi adiga kugu saabsan, sumaddaada, wax soo saarkaaga ama shirkaddaada. Kaliya waxay siinaysaa habab ay dadku kula soo xiriiraan iyada oo loo marayo this dhexdhexaad gaar ah.
Sida Loo Dejiyo Dhagaystayaasha Micro-Blog
Si aad dhab ahaantii u sameysato 'dhagayste', waxaad si fudud u aadi kartaa Google oo aad ka raadin kartaa ereyga aad raadineyso (tan twitter tusaale wuxuu muujinayaa raadinta "xayeysiiska microsoft" ee twitter):
site: friendfeed.com "xayeysiiska microsoft"
Haddii aad jeclaan lahayd inaad tallaabo hore u qaaddo oo aad si dhab ah uga jawaab celiso dadka waawayn ee adiga kugu saabsan, sheygaaga, ama sumaddaada, samee Google Alert inuu kuugu soo diro email ahaan sida ay wax u dhacaan. Maadaama aan ahay suuq-geyn ama maamule sumcad, xitaa waxaan sameyn karaa digniin qoraal ah oo leh Alerts Google oo waxaan si toos ah uga jawaabi lahaa tweet-ka.
5 Istaraatijiyadaha Lagu Hesho Webka
Sep 20, 2008 at 9: 39 PM
Hagaag durh! Waxaad u maleyneysaa inay taasi u muuqan laheyd dadka badankood. Sanqadhaha sida aysan “runti” u fahmin twitter ma fahmaan?
Waad saxantahay, Jason. Markii aan arkay qoraalka ku yaal bogga kale ee ku saabsan dejinta 'dhegeyste twitter ah' laakiin ma jirin macne dhab ah oo 'dhageysi', waa inaan qoraa boostada!
Waxaan had iyo jeer isweydiiyaa sida shirkadaha aan ku sheego Twitter ay awood ugu yeeshaan inay i helaan oo ay jawaab uga bixiyaan. Hadda waan ogahay. Mahadsanid.
Sep 22, 2008 at 2: 46 PM
Hambalyo, Douglas .. waad ku mahadsan tahay iskuxirka!
Inta badan talobixinta Bet ee ku saabsan dhageysiga ayaa dhab ahaantii ku jirta muqaalka. Qaybta hore ee boostada, way kugu dhex socotaa sida loo sameeyo xisaab, laakiin filimka muqaalka ah ayay ku galaysaa faahfaahinta sida loo dhagaysto noocyada, isbeddellada iyo faahfaahinta kale ee laga yaabo inaad xiisaynayso barta cilmi baarista ee suuqa ee aragtida.
Dhab ahaantii waxay ku dhex jirtaa dhagaysiga wada hadalka, laakiin waxaa jira xoogaa fiican oo ah "sida loo dhagaysto" talooyin ku saabsan muqaalka.
Farxad .. Kate
Sep 22, 2008 at 3: 48 PM
Aad baad ugu mahadsantahay inaad tan i ogeysiisay! Labadiinaba waxaan kugu leeyahay raali gelin, waxaan moodayay inaan is badalay. Waxay umuuqataa inaan ubaahanahay inaan soo noqdo oo aan dhageysto!
Sep 24, 2008 at 2: 21 PM
Wor Walwal ma leh! Aniguba waan layaabay markaan markii uhoreysay aqriyay - laakiin kadib waxaan kuqoday korontada. SOme waxyaabo wanaagsan. Bey waa wacdiye aad u xeel dheer oo cilmiga bulshada yaqaan !!
Sep 28, 2008 at 1: 51 PM
Xitaa xitaa habka ugu fudud ayaa ah in la isticmaalo TweetBeep.com oo lafteeda adeegsata Summize hore http://search.twitter.com. Waxaan u adeegsadaa TweetBeep si aan ula socdo keywords badan oo kala duwan oo ay ku jiraan dhammaan khaladaadka kala duwan ee magacayga dambe! 🙂
Sidoo kale kuwa xiiseynaya waxaan u diyaariyey isbarbar an Horudhac Twitter in aan geeyey at Kulankii Ganacsi ee Websaydhka Atlanta ee dhowaan dhacay.
Mike, taasi waa helitaan weyn! Aad ayay u xun tahay in Tweetbeep uusan lahayn nooc ka mid ah muuqaalka degdegga ah ee lagu qabsanayo ereyadaas raadinta. Haddii saacad ay ag marto in qof uu ka hadlayo shirkaddaada - waa soo daaheysaa!
Waxaan ku daray xiriiriyeyaasha maalinlaha ah shalay, in kastoo! Waad ku mahadsantahay qabashadii!
Blog Bloke - Kaa Caawinaya inaad Noqoto Blogger Ka Fiican
10, 2008 at 6: 06 PM
Waa salaaman tahay Douglas.
Waxaan doorbidayaa inaan ku biiro natiijooyinka raadinta Twitter newsfeed (geeska midigta sare) sida oo kale:
Qaabkaas kama sugayo e-mayl digniino Google ah. Waan heli karaa macluumaadka waqti kasta oo aan doorto.
10, 2008 at 7: 11 PM
Waqtigaagu waa mid aan fiicnayn, Bloke! Taasi waxay ahayd aniga boostada maanta!
10, 2008 at 9: 24 PM
Had iyo jeer gabar aroos ah .. waligeed aroosad 😉